Halyeey kooxda Liverpool ah oo si xiiso leh kaga hadlay awooda ciyaareed ee Romelu Lukaku – Gool FM
(London) 12 Sebt 2021. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Graeme Souness ayaa falanqeeyay qaab ciyaareedka Romelu Lukaku kaddib markii uu kaga caawiyay Chelsea inay ku garaacaan naadiga Aston Villa garoonka Stamford Bridge.
Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge guul kaga gaartay kooxda Aston Villa, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada isbuuca afaraad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, xilli Lukaku uu dhaliyay 2 gool.
Weeraryahanka reer Belgium ayaa ku soo laabtay kooxda reer London kaddib codsi ka yimid tababaraha reer Jarmal ee Thomas Tuchel, waxaana ammaanay qaab ciyaareedkiisa falanqeeyaha Sky Sport iyo xiddigii hore ee Liverpool ee Graeme Souness.
Haddaba Graeme Souness oo ka hadlayay qaab ciyaareedka weeraryahanka kooxda Chelsea ee Romelu Lukaku, ayaa wuxuu yiri:
“Aad ayuu ugu fiican yahay wax walba, Lukaku wuxuu ka mid noqon doonaa tiirarka ugu waaweyn ee kooxda Thomas Tuchel.”
“Dhalinta goolasha waxay bedeshaa kulamada, haddii aad haysato ciyaaryahan goolal dhalin kara, waxaad kooxda u badeleysaa heer kale.”
“Waxaan u malaynayaa in Man United ay qaadatay go’aan khaldan si ay u fasaxdo, laakiin wuxuu soo noqday isagoo faraxsan.”
“Ma laha daciifnimo, ma dhahayo wax walba wuu ku fiican yahay, laakiin ma laha daciifnimo cad, oo haddii aad isaga la ciyaarto adiga oo ah daafac dhexe, aad buu kuu dhibi doonaa.”
“Uma malaynayo in qofna ku raaxaysan doono kahor imaadkiisa, wuxuu haystaa wax kasta oo suurtogal ah si uu u sameeyo farqi, wuxuuna sii ahaan doonaa mid muhiim ah oo wax u go’aamiya Chelsea haddii uu taam ahaado.”